Ukhuphiswano lwe-Monopolistic: yintoni, iimpawu kunye nemizekelo | Ezezimali
Ukhuphiswano lokuzimela wedwa
Encarni Arcoya | | Uqoqosho ngokubanzi
Kuqoqosho lwentengiso, sinokukuxelela ngeendlela ezininzi zezakhono. Ukubazi kunokukunceda ufumane ukuba intengiso abasebenza kuyo injani, ngakumbi ukuba ufuna ukuqala ishishini kuyo. Kwaye, kwezinye iimeko, unokuzifumana ukhuphiswano olubizwa ngokuba lodwa.
Ngaba uyazi ukuba yintoni? Ziziphi iimpawu ezinazo? Baziphatha njani? Siphumelela kukhuphiswano lokuzimela geqe ukuze uyiqonde ngcono.
1 Yintoni ukhuphiswano lokuzimela wedwa
2 Iimpawu zokhuphiswano lokuzimela wedwa
3 Izinto eziluncedo nezingalunganga
3.1 Into entle ngolu khuphiswano
3.2 Icala elibi kukhuphiswano lokuzimela wedwa
4 Zeziphi iinkampani ezikukhuphiswano lokuzimela wedwa
Yintoni ukhuphiswano lokuzimela wedwa
Ngendlela elula, sinokukuxelela ukuba ukhuphiswano lokuzimela geqe yenye yeenkampani ezinabantu abaninzi abakhuphisana nabo; Ngamanye amagama, zininzi iinkampani ezithengisa into enye, nangona zineemveliso ezahluke kancinane.
Ngamanye amagama, ngu ukhuphiswano apho kukho abathengisi abaninzi, apho ixabiso lemveliso lichaphazeleka ngendlela ethile kodwa abanomahluko omncinci kakhulu phakathi kweemveliso zabo, ukuze kungabikho mahluko mkhulu phakathi kwenye nenye.
Ixabiso ngokwalo limiselwe lolo tshintsho lufihlakeleyo banalo, yile nto abathengisi badlala ngayo ukuze beme kwimarike.
Iimpawu zokhuphiswano lokuzimela wedwa
Ngoku ukuba uqonda ngakumbi ngokhuphiswano lwamaqela onke, kuya kufuneka uyazi ukuba zeziphi iimpawu ezichazayo. Ukuqala, inyani yokuba kukho inani elikhulu leenkampani kwimarike; Ngamnye kubo uthatha izigqibo, esekwe kwimveliso, kwimveliso, ekubekeni ixabiso, njl. Balawula ngokwenene ishishini lakho, kodwa abachaphazeli intengiso iyonke.
Olunye uphawu kukuba iinkampani zibonelela ngeemveliso ezingahambelaniyo. Ngoku, ezi zinokufana, kodwa zinezinto ezithile ezahlukileyo. Umzekelo, cinga iivenkile ezimbini zokutyela. Kwiileta zabo kukho izitya ezimbini zecrocquettes, kodwa xa uzazisa, enye nenye iya kuyenza ngendlela ethile, ukongeza ekusebenziseni izinto ezahlukeneyo zokwenza izinto, iindlela zokupheka, njl. Yiyo loo nto eyenza umahluko nokuba ziyafana okanye ziimveliso ezifanayo.
Iinkampani ziphawula amaxabiso eemveliso zazo. Kwaye bayenza ngaphezulu kwako konke ukucinga malunga nezo nkcukacha zibenza bahluke kulo lonke ukhuphiswano lwabo.
Okokugqibela, kuya kufuneka uyazi loo nto kukhuphiswano lokuzimeleyo, intengiso ayivaliwe; Ngamanye amagama, iinkampani zinokungena kwaye ziphume ngaphandle kwengxaki okanye isohlwayo sokushiya iimarike zishiya ezinye iinkampani. Ngamanye amagama, akukho mqobo wokungena okanye uphumayo, yiyo loo nto kukho inani elikhulu leenkampani.
Izinto eziluncedo nezingalunganga
Nangona, kwinto esiyibonileyo, yonke into inokuba ilungile kukhuphiswano lokuzimela wedwa, inyani kukuba, njengakulo naliphi na ishishini, kukho izinto ezintle nezimbi. Siziveza kuwe apha ngezantsi.
Into entle ngolu khuphiswano
Phakathi kwezibonelelo okanye izibonelelo zolu hlobo lwezakhono zezi:
Kukho ukwahluka kwiimveliso ezithengiswayo. Ezi zinto zibalulekileyo kwimveliso nganye, ezenza ukuba zahluke enye kwenye, zivumela abathengi ukuba bakhethe ngokusekwe kukhetho okanye iimfuno zabo, ngaphandle kokuhlala kukhetho olufumanekayo kuphela.
Intengiso inamandla. Njengoko kungekho zithintelo, kwaye ngokuvumela iinkampani ukuba zize zidlule, ubuchule, ubuqili kunye nobuchule bunokungena kwicandelo, lenze iinkampani zitshintshe rhoqo ukunikezela ngeemveliso ezifanayo, ezahlukileyo kwenye, kodwa ezikhuphisana nezabanye.
Kwimeko apho kukho ilahleko okanye intengiso ayibhatali, ungaphuma. Ngaphandle kwemiqobo, ngaphandle kokuhlawula izohlwayo ... umane unyamalale kuloo marike.
Icala elibi kukhuphiswano lokuzimela wedwa
Ngoku, ngaphandle kwako konke oku kungasentla, gcinani engqondweni ukuba:
Xa ujonge lo mahluko kwiimveliso, Kuya kufuneka utyale imali kwezinye izinto ezikuncedayo wahluke kukhuphiswano lwakho. Umzekelo, kwintengiso, kwintengiso ... Oko kuthetha uthotho lweendleko, ngamanye amaxesha, ezinokuba phezulu kakhulu ukufikelela kwintengiso.
Akukho sibonelelo sincinci, ngakumbi ukuba baninzi abantu okhuphisana nabo kwintengiso. Umzekelo, cinga ukuba edolophini, endaweni yokutyela, kukho amashumi amahlanu. Abantu bedolophu bazakufana, kwaye abazukutya amaxesha angama-50, ke kuyakubakho iinkampani ezixhamlayo kunye nezinye ezingafumaniyo.
Awunalwazi kumaxabiso okanye iimveliso. Ngaphandle kophando lwakho, kodwa inokuba yingxaki yokuhlola kukhuphiswano.
Zeziphi iinkampani ezikukhuphiswano lokuzimela wedwa
Imizekelo yokhuphiswano lwabodwa ininzi onokukhetha kuyo. Ngapha koko, kukho amacandelo amaninzi apho sinokufumana iinkampani ezikolu hlobo lokhuphiswano.
Omnye umzekelo ngu Inditex Sele uyazi ukuba liqela leenkampani zefashoni, ezibandakanya iivenkile ezaziwayo ezinje ngeZara, Massimo Dutti, Tsala kunye neBhere ... Zonke zinikezelwe ngokufanayo, kwaye zinikezela ngokufanayo, kuphela umahluko abo baphawula ixabiso abanalo.
Ngaba uyafuna omnye umzekelo? Kulungile UMcDonald's kunye noBurger King. Zombini zinikezelwe kwinto enye, ukutya okukhawulezayo, kodwa zineemveliso ezahlukeneyo, nokuba ziyafana, kunye namaxabiso awahlukeneyo. Oku kuthetha ukuba bakhuphiswano lokuzimela geqe kuba banikezela ngeemveliso ezahlukileyo, ngamaxabiso ahlukeneyo. Kwaye apha singabeka iivenkile zokutya okukhawulezayo kuba uninzi lubonelela ngeemenyu ezifanayo.
Umzekelo wesithathu, ngokubanzi, iya kuba ziindawo zokutyela. Zonke zinikezela ngamamenyu afanayo kakhulu (okanye sinokwahlulahlula ngohlobo lwe-gastronomy) kwaye amaxabiso abo ayayahlula, okusenza sicinge ukuba sikolu hlobo lokhuphiswano.
Okanye kwimeko ye- iibhiskithi. Ukuba uya kwivenkile enkulu kwaye ubone icandelo lale mveliso, uya kufumanisa ukuba zininzi kwaye zonke zahlukile, ngamaxabiso awohlukeneyo. Kodwa benza into efanayo: yenza ii-cookies.
Ngoku ekubeni usazi okungakumbi ngokhuphiswano lwabodwa, kwaye ubone imizekelo, ngokuqinisekileyo akunzima kuwe ukuba uchonge olu hlobo lwenkampani kubomi benene. Ngokwenyani, zininzi ezinokubakho ngale ndlela. Ngaba ilungile okanye ayilunganga? Sele ixhomekeke kwinkampani ngokwayo kunye nezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga nganye nganye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ukhuphiswano lokuzimela wedwa